Ithegi: ividiyo eshukumayo | Martech Zone
Ithegi: ividiyo eshukumayo
Lwesine, ngoFebruwari 18, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
U-2015 ibingunyaka wokophula irekhodi yemveliso yevidiyo, kunye nokubonwa kwevidiyo ukuya kwi-42% ukusuka kwi-2014. Ayililo lonke ibali, nangona kunjalo. I-45% yazo zonke iimbono zevidiyo zenzekile kwiselfowuni. Ngapha koko, kwikota yokugqibela ka-2015, ukubonwa kwevidiyo eshukumayo kukhule amaxesha angama-6 ngokukhawuleza kunokubukwa kwevidiyo yedesktop. Le nenye idatha ebonelelwe kwiNgxelo yeVidiyo yeeBhenkmark zeMveliso yeVenkile ka-2015 inazo zonke izizathu zokuthengisa ezifuna ukuphumeza isicwangciso sevidiyo… kwangoko. Sisebenze kunye
I-infographic enazo zonke izizathu zokufuna ukugxila kwiselfowuni
NgoMvulo, Meyi 18, 2015 NgoLwesihlanu, Meyi 29, 2015 Douglas Karr
Sichithe iziqendu ezimbalwa kwi-Edge yeWebhu yeRadio yokuxela kubaphulaphuli bethu ngokubaluleka kweselfowuni. Sihlala sithetha ngokwentengiso eshukumayo kodwa njengoko bendihleli esitishini ndixoxa ngomboniso no-Erin Sparks weSicwangciso-qhinga seSiza, kwaqala ukundikhanyisela indlela yokuziphatha okunobuzaza eguqukayo ngokusekwe kubomi bam. Ngokuhlwanje ndibhale umhlobo wam olungileyo ekhalazela eyakhe